ओलीको प्रश्न : वाइडबडी खरिद र ३८ क्विटल सुनको तस्करी हुँदा सत्तामा को थियो ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी खरिद र ३८ क्विन्टल सुनको तस्करी हुँदा सत्तामा को थियो भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् । शनिवार सचिवालयमा पेश गरिएको राजनीतिम प्रतिवेदनमा उनले यसबारे प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, वाइडबडी भनिने ‘एयरबस ३३०’ खरिद गर्दा सरकारमा को थियो ? ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो ? ललितानिवास प्रकरण कहिलेबाट र कोको हुँदै अगाडि बढेको थियो ? सबै स्पष्ट छैन र ? उनले केही केसहरुमा आफूलाई जबर्जस्ती जोड्ने धृष्टता गर्नुले प्रचण्डभित्र रहेको पूर्वाग्रह मात्रै दर्शाउने बताएका छन् ।
उनले थपेका छन्, आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरुको सुरक्षा र वर्षेनी अर्बौंको स्रोत बाहिरिरहने अवस्था नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत काम अगाडि बढेका छन् । तर यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । सम्झौतै नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्रै हो ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’मैले त विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरुको उत्खनन गर्ने, दोषीहरुलाई कानुनी कार्बाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ । सम्झौता गर्नेहरुलाई चोख्याउने र त्यसको उत्खनन गरेर कार्बाहीको दायरामा ल्याउनेलाई चााहिँ दोषी बनाउने ? विगतदेखिका अनेकौँ काण्डहरुमा वर्तमान सरकारलाई जबर्जस्ती मुछेर गरिने भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा क्रमशः खुल्दै छ ।’
प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७७, शनिबार ६ : १२ बजे